HORDHAC: Real Madrid vs. Ajax – Solari Oo Imtixaankii Mustaqbalkiisa Go’aamin Lahaa Maraya, Shaxda macquulka ah, Dhaawacyada, Ganaaxyada & Wararkii Ugu Dambeeyey – Latest Sports News
HORDHAC: Real Madrid vs. Ajax – Solari Oo Imtixaankii Mustaqbalkiisa Go’aamin Lahaa Maraya, Shaxda macquulka ah, Dhaawacyada, Ganaaxyada & Wararkii Ugu Dambeeyey
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa lugta labaad ee wareegga 16-ka tartanka Champions League ku martigelinaysa kooxda reer Netherlands ee Ajax oo kulankii hore ay kusoo kala adkaadeen 2-1 ay Los Blancos guushu ku raacday.
Real Madrid oo laba jeer ay afar maalmood gudahood Barcelona guul-darro ugu xambaarisay isla garoonka ay ciyaarta caawu ka dhacayso ayaa wax walba u samayn doonta guul ay ka hesho kulankan si uu u badbaadi karo mustaqbalka tababare Santiago Solari.
Kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid oo usbuucii hore ka hadhay tartanka Copa del Rey oo finalkiisa ay u gudubtay Barcelona oo jidka kusii martay, ayaa waxay u muuqataa inay maca-salaamaysay LaLiga kaddib markii ay 12 dhibcood ka hoos martay kooxda hoggaanka haysa ee Blaugrana oo Sabtidii 1-0 ku dhirbaaxday.
Labadaas guul-darro ayaa waxay ka dhigan yihiin in fursadda kaliya ee ay Real Madrid u haysato inay koob ku guuleysato xili ciyaareedkan uu yahay tartanka Champions League oo saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey ay kusoo guuleysatay, waxaanay u baahan tahay inay guul kasoo hoyso ciyaartan si ay niyaddu ugu dhisanto laacibiinta quusta taagan.
Tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, waxa uu Real Madrid u yahay markii 23aad ee ay u gudubto wareegga isreeb-reebka ee 16-ka, waxaanay kusoo guuleysatay 13 ka mid ah, waana naadiga ugu weyn tartankan taariikhdiisa.
Shantii jeer ee ugu dambeeyey ee Real Madrid ay garoonkeeda ku qaabishay koox kasoo jeedda waddanka Netherlands dhamaantood way wada guuleysatay, waxaana rikoodhkeedaas sii xoojinaya in 40-kii kulan ee ugu dambeeyey ee kooxaha waddankaas ay khasaartay lix ciyaarood oo kaliya. 34 ka mid ah ciyaarahaas oo ka tirsanaa tartamada UEFA, kaliya hal kulan ayuu khasaare kasoo gaadhay Real Madrid, waxaanay khasaarahaas kaga soo kabatay lugtii labaad oo ay kusoo aargoosatay.
Marka la eego kulamadii Real Madrid ee xili ciyaareedkan, waxa musiibo weyn ka haysataa khadka dambe ee difaaca iyo dhalinta goolasha, waxaana 19-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ay shabaqeeda nadiif ka dhigtay saddex ciyaarood oo kaliya, halka toddobadii kulan ee ugu dambeeyeyna dhamaantood goolal laga dhaliyey.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey dhamaan tartamada, Real Madrid waxay guuleysatay afar ka mid ah, waxaana laga badiyey laba, waana ciyaarihii Barcelona ay ku karbaashtay.
Dhinaca kale, kooxda reer Netherlands ee Ajax ayaa ku jirta xili ciyaareed wanaagsan oo ay kusoo bandhigayso fagaareyaasha, waxaanay taas markhaatigeeda ku furtay kulankii ay ku martigelisay Real Madrid bishii hore oo ay bandhig cajiib ah la timid, balse nasiibku guusha siiyey Real Madrid.
Intii ka dambaysay guul-darradii ay Los Blancos kala kulantay, kooxda uu tababaraha ka yahay Erik ten Hag ee Ajax waxay dhulka la dhacday oo ay ciilkii iskaga bi’isay NAC Breda, Ado Den Haag iyo Fereynoord, waxaanay kulamadaas ku dhalisay 13 gool halka hal goo loo kaliya laga dhaliyey, waxaanay taasi soo gaabisay farqigii ay PSV Eindhoven kaga haysay hoggaanka horyaalka Eredivise oo laba dhibcood oo kaliya noqday.
Ajax, xili ciyaareedyadii ugu dambeeyey waxay ku dhibaatootay tartanka Champions League, waxaana ugu dambaysay inay soo gaadho wareegga 16-ka sannadkii 2005, manay u gudbin wareegga siddeedda kooxood intii ka dambaysay xili ciyaareedkii 2002-03.
Marxaladdii Groupyada ee tartankan Champions League, Ajax waxay muujisay inay si weyn u dhisantay, lagamana badinin iyadoo labadii ciyaarood ee Bayern Munich marnaba barbar-dhac gashay, marka kalena guusha u damaashaadday, iyadoo 12 dhibcood soo urursatay.
23-kii ciyaarood ee horyaalka dalka Netherlands ay ciyaartay Ajax, waxay soo dhalisay 82 gool, waana rikoodh walaac gelinaya Real Madrid ka hor ciyaarta caawa, hase yeeshee toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Ajax ay la yeelatay Real Madrid dhamaantood way ku guul-darraysatay, waxaana loogu daray 22 gool oo laga dhaliyey, waxaana taas kasii daran in 15-kii ciyaarood ee ay ka hor tagtay kooxo reer Spain ah ay laba guulood oo kaliya ka heshay, hal kulanna barbar-dhac gashay.
Marka si guud loo eego, lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey, Ajax waxay guuleysatay afar ka mid ah, labada kalena waa laga adkaaday.
Ciyaarta: Real Madrid vs Ajax
Real Madrid waxa ciyaartan ka maqnaan doona kabtankeeda Sergio Ramos oo kaadh badheedh ah qaatay ciyaartii hore ee Ajax ay ugu tageen Amsterdam, kaas oo sababay in xidhiidhka kubadda cagta UEFA uu ugu daro hal kulan oo kale oo ganaax ah, taas oo ka dhigan inuu ka maqnaan doono ciyaarta caawa iyo haddii ay soo gudubto kulanka ugu soo horreeya ee wareegga siddeed dhamaadka.
Gareth Bale oo lagu soo bilaabay ciyaartii Sabtidii ee El Clasico ayaa taam u ah kulankan, hase yeeshee iskaga baxay garoonka markii la beddelay ciyaartaas oo aan dhamaanin.
Solari ayaa shaxdiisa kusoo bilaabi doona saddexda tiir ee afka hore ee Lucas Vazquez, Karim Benzema iyo Vinicius Junior, sidoo kalena waxa uu go’aan ka gaadhi doonaa inuu isbeddel ku sameeyo khadkiisa dhexe ee Casemiro, Kroos iyo Luka Modric oo dhaliilo loo jeedinayo.
Booska uu banneeyey Ramos ayaa waxa buuxin doona Nacho oo ka garab ciyaari doona Raphael Varane, halka difaaca midig aanay cidina ku qabsan doonin Dani Carvajal balse baasha bidix ay ku dagaallami doonaan Marcelo iyo Reguilon.
Dhinaca Ajax, waxa khadka dhexe lugtii hore ee Amsterdam ugu soo bilowday Dusan Tadic, markana lama filayo inuu booskiisa waayo, waxaana sidoo kale taam ah Kasper Dolberg iyo Klaas-jan Huntelaar oo doonaya inuu ka hor tago kooxdiisii hore ee Real Madrid iyo taageereyaashii u sacbin jiray.
Hakim Ziyech iyo David Neres ayaa khadka dhexe la wadaagi doona Tadic, halka Frenki de Jong oo Barcelona ku biiri doona xagaaga uu garab istaagi doono Lasse Schone.
Difaacii Hore ee Manchester United ee Daley Blind ayaa difaaca ay wada istaagi doonaan Matthijs de Ligt, halka bartilmaameedka Arsenal ee Nicolas Tagliafico uu baasha bidix ka ciyaari doono.
Rikoodhka kulamadii hore ee labadan kooxood
Real Madrid iyo Ajax waxay ku kulmeen tartamada Yurub 13 jeer, waxaana siddeed ka mid ah guuleysatay Real Madird, afarna Ajax halka kulanka hadhayna ay barbarro noqdeen.
Toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee ay kulmeen, waxa guuleysanaysay Real Madrid, laakiin Ajax ayaa afar jeer oo xidhiidh ah garaacday intii u dhaxaysay April 1973 illaa November 1995kii.